Muusikada dhaqanka norwejiga | Safarka Absolut
Sida wadamada kale ee Scandinavian-ka, Muusikada dhaqanka ee norwejiga wuxuu leeyahay xididdadiisa xilliyadii dhexe. Si kastaba ha noqotee, muujinta ugu horreysa ee la diiwaangeliyey waxay soo jirtay bartamihii qarnigii XNUMX-aad. Waa muusikada, in kasta oo ay tahay saamayntiisa Masiixiyiinta ah ee aan la inkiri karin, waxaa ku dhiirrigeliyay khuraafaadkii hore ee jaahilka ee laga soo bilaabo xilligii Vikings.
Muusigani, oo lagu tilmaamay mid fudud oo farxad leh, ma uusan lahayn ujeedo kale oo aan ka ahayn madadaalo iyo ciyaar. In kasta oo ay mar uun ka baxday qaab ahaan oo ay qarka u saarneyd inay lumiso, haddana waxay hadda la kulmeysaa casri cusub oo dahabi ah. Sababta: jiilasha cusub ayaa dib ula soo noqday xiisihii ay u qabeen Taariikhda Norwey iyo dhaqankeedii hore.
1 Asalka muusikada dhaqanka Norwey
2 Noocyada muusikada dadweynaha ee Norwey
2.1 Muusikada qalabka
2.2 Muusikada codka
2.3 Dhaqanka kooxda
3 Qalabka muusikada dadwaynaha ee Norwey
4 Toddobaadka Muusikada Dadweynaha
Asalka muusikada dhaqanka Norwey
Dhaqankii fannaaniinta waddooyinka caanka ah magaalooyinka waaweyn ee dalka (Oslo, Bergen iyo Trondheim) waxay bilaabmaysaa dhammaadkii qarniyadii dhexe. Si kastaba ha noqotee, waa laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad markii aasaasida buugaagta muusikada ugu weyn iyo tirooyinka ugu horreeya ee weyn ay soo baxaan.
Georg von bertouch, Johan Daniel Berlin y Johan Henrik Berlin iyaga waxaa loo tixgeliyaa, iyo kuwo kale, inay yihiin aabbayaal muusigga dadwaynaha reer Norway. Qaar ka mid ah cantataskiisa ama qaybo ka mid ah qoob ka ciyaarka waxaa wali sameeya fanaaniin da 'yar oo isku daya inay ilaashadaan una gudbiyaan dhaxalkan dhaqan ee qaaliga ah.
Noocyada muusikada dadweynaha ee Norwey
Muusikada dadwaynaha ee Norwey waxaa loo qaybin karaa laba qaybood oo ballaaran: muusikada qalabka y muusig cod ah.
Waxaa looureeyay waxkastoo kahore in la dheesho Ku Qoob-ka-ciyaarka dhaqanka Norwey (oo loo yaqaan ))), Waa qoob-ka-ciyaarka lagu sameeyo koox ama labo-labo. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaab qoob-ka-ciyaar shakhsiyeed oo loo yaqaan halista. Laxanka la socda qoob-ka-ciyaarkan ayaa badiyaa ka kooban laba ama saddex jeer.
ka bygdedans, mararka qaarkood loo yaqaan Qoob ka ciyaarka maxkamadaha, waxay kuxirantahay taariikhaha qaarkood ee jadwalka gaar ahaan loo calaamadeeyay goosashada ama Kirismaska, laakiin sidoo kale aroosyada, aaska iyo dabaaldegyada kale.
Noocan muusikada dad-weynaha noorwiijigu waa muujinta laba dhaqan oo aad u kala duwan:
La music sami dhaqameed, oo loo yaqaan qaab cod gaar ah oo la yiraahdo kaftan. Dhawaaqiisu waa mid isbarbar dhigaya heesta dhaqameed ee dhaqamada qaar ee loogu yeero waxa loogu yeero Ummadaha Koowaad ee Waqooyiga Ameerika.
La muusikada dhaqameed ee xididdada Jarmalka waxaa lagu muujiyey ballads gaabis ah (qof) iyo heeso firfircoon, badanaa la macmalay (Steve).
Marka lagu daro labadan mawjadood ee folkloric-ka, muhiimadda ay leedahay muusikada choral, weli wuu ka weyn yahay labadii hore. Koorsooyinka, oo aad ugu baahsan juqraafiga dalkan, waa mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee reer Norway. Magaalada of Volda, tusaale ahaan, iyadoo ay ku nool yihiin qiyaastii 6.000 oo qof, waxay leedahay wax aan ka yarayn 20 fanaaniin firfircoon. Sannadka oo dhan waxaa la qabtaa xaflado iyo tartamo fara badan oo kiciya rajo weyn iyo xiiso.
La Ururka Qaranka ee Fanaaniinta Dadweynaha Reer Norway, oo la aasaasay 1923, waxay leedahay qiyaastii 6.000 xubnood waxayna isu keentaa in ka badan boqol ururro maxalli ah.
Qalabka muusikada dadwaynaha ee Norwey
Qalabka ugu caansan ee muusigga dadwaynaha Norway waa violin. Waa nooc khaas ah oo loo yaqaan 'violin', oo leh shan xarig oo is barbar socda iyo qaabab qalooca oo ka yar: the Hardanger violin. Qalabkan waxaa laga sameeyay koonfurta dalka qarnigii XNUMX-aad.
Hardanger-ka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay Qalabka qaranka Norway. Waxay noqon kartaa isbeddelka qalabkii hore ee Scandinavian-ka. Waxaa lagu kala soocey qurxintiisa quruxda badan iyo dhawaqa muujiya. Fiidiyowga soo socda waxaad ku raaxeysan doontaa muunad cajiib ah oo ku saabsan sida dhawaqgan muusigga ah ee reer Norway u muuqdo:
Badanaa qaybaha muusiga waxaa loo fasiraa hal violin. Si kastaba ha noqotee, way badan yihiin qalab kale oo norweji ah kaas oo raaci kara kalidaa. Waa kuwan qaar ka mid ah:
El bukkehorn ama geeska geeska.
El harpeleik, Nooc ka mid ah jilbaha.
El lur, buunka iskandaneefiyanka dhaqameed.
La isjefløyte ama biibiile willow.
El melhus, oo la mid ah clarinet.
Toddobaadka Muusikada Dadweynaha
Habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo loona raaxaysan karo heesaha hiddaha iyo dhaqanka ee Noorway waa inaad tagto meesha loo yaqaan 'the Folkemusikkveka (Toddobaadka Muusikada Dhaqanka ee Norwey). Bandhiggan, oo la qabtay tan iyo 1976, wuxuu diiradda saarayaa dhinaca muusikada in kasta oo ay u dabaaldegayso dhaqanka waddanka noocyadiisa oo dhan si ballaadhan.
Xarunta dhexe ee Folkemusikkveka waa magaalada Hallingdal, oo qiyaastii 100 kiiloomitir waqooyi-galbeed ka xigta caasimadda, Oslo. Magaaladan yari waa barta kulan ee ugu weyn dhamaan violinistayaasha waaweyn ee wadanka oo dhan. Toddobaadkan gudihiisa, booqdayaashu waxay ka qayb geli karaan dhammaan noocyada bandhigyada muusikada, laga soo bilaabo riwaayadaha fiidkii ilaa tartamada qoob-ka-ciyaarka. Waxay sidoo kale bixisaa fursad aad u fiican oo lagu dhadhaminayo qaar ka mid ah suxuunta waaweyn ee cunnada Scandinavian-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Muusikada dhaqanka ee norwejiga